सुर्यग्रहण कसरी हेर्ने ? के गर्ने, के नगर्ने ?? – NawalpurTimes.com
सुर्यग्रहण कसरी हेर्ने ? के गर्ने, के नगर्ने ??
प्रकाशित : २०७६ पुष ९ गते २०:३१
काठमाडौं, पुस ९ गते । बिहीबार बिहान सूर्यग्रहण लाग्दैछ । अंग्रेजी क्यालेण्डर बमोजिम बिहीबार लाग्ने ग्रहण यसवर्षको अन्तिम सूर्य ग्रहण हुनेछ । नेपालबाट अवलोकन गर्दा सूर्यको केही भागमात्रै ढाकिएको हुनाले खण्डग्रास मात्र देखिनेछ ।
नेपालमा बिहान ८.३० मिनेटमा सुरु हुने सूर्यग्रहण १०.१ मिनेटमा मध्य हुने र ११.३१ मिनेट जाँदा सकिने नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ । ग्रहणको समयमा नेपालबाट करीब १०.०० बजे सूर्यको करीब ४० प्रतिशत भाग ढाकिएको देखिने सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताउनुभयो ।
कुन राशीलाई के योग ?
ज्योतिष केशव गौतमले सूर्यग्रहण लागेको बेला आठ राशीले सूर्यग्रहण हेर्न वर्जित रहेको बताउनुहुन्छ । सूर्यग्रहणको बेला धनु राशीको मूल नक्षत्रमा रहने हुनाले धनु राशी र मूल नक्षत्र भएका ब्यक्तिले सूर्य ग्रहण हेर्न नहुने उहाँ सुझाउनुहुन्छ । उहाँले यसपटकको सूर्यग्रहण चार राशीका लागि मात्रै लाभ योग रहेको प्रष्ट्याउनुभयो । कर्कटलाई सुख प्राप्ति, तुलालाई श्री÷यश÷मानको प्राप्ती हुने तथा कुम्भ राशी भएकाले धन, पदलाभ हुनसक्ने र मीन राशीलाई सुख प्राप्ती हुनेछ ।
सामान्यतया चन्द्रमा सूर्य र पृथ्वीको बीचमा पर्दा सूर्यग्रहण लाग्छ । पृथ्वी र चन्द्रमाले सूर्यको परिक्रमा गर्ने क्रममा चन्द्रमा सूर्य र पृथ्वीको ठीक बीचमा पर्ने संयोग नै सूर्यग्रहण हो । अर्थात चन्द्रमा बीचमा परेको बेला सूर्य चन्द्रमाले छेक्न पुग्दा पृथ्वीमा छायाँ बन्न जान्छ । र छायाँ बनेको पृथ्वीको धरातलमा सूर्य छेकिन गएको देखिने अवस्थालाई सूर्यमा ग्रहण लागेको भनिन्छ । खण्डग्रास र खग्रास सूर्यग्रहण देखिनुमा विभिन्न तत्वले काम गरेको हुन्छ । चन्द्रमा र पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने क्रममा प्रत्येक १८ महिनामा पृथ्वीको कुनै न कुनै भागमा सूर्यग्रहण लागेको देखिन्छ ।
चन्द्रमाको बनोट करीब साढे करोड वर्षअघि भएको विश्वास गरिन्छ । र बिस्तारै चन्द्रमा पृथ्वीबाट टाढिदैछ । उक्त दुरी वार्षिक करीब १.६ इञ्च÷चार सेन्टिमिटर मापिएको छ । वर्तमान अवस्थामा आकाशमा चन्द्रमाको आकार सूर्यको जत्तिकै देखिन्छ । र त्यसै कारणले पूर्णरुपमा छेकेको देखिने हो । तर उक्त कारण सधैं सत्य हुन्न ।
नेपालबाट सूर्यको खण्ड परेको भाग मात्रै देखिने हुँदा यसपटकको ग्रहणलाई वलय सूर्य ग्रहण भनिएको हो । नेपालबाट ‘रिङ्ग अफ फायर’को आकारमा सूर्य देखिन्न । तर यूरोप, एसिया, अष्ट्रेलिया र अफ्रिकाको केही भागबाट भने सूर्य उक्त आकारमा देखिनेछ ।
नेपालको पूर्वी भागबाट यसअघि सन् १९६५ को नोभेम्बर २३ तारेखको बिहान ‘रिङ्ग अफ फायर’को आकारमा सूर्य देखिएको थियो । अब फेरि नेपालले उक्त संयोगका लागि करीब ४५ वर्ष कुर्नुपर्नेछ । ‘रिङ्ग अफ फायर’कै आकारमा अब सन् २०६४ को फेब्रुअरी १७ को बिहान नेपालबाट सूर्य ‘रिङ्ग अफ फायर’को आकारमा देखिने नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ ।
ज्योतिष शास्त्रले सूर्यग्रहणबारे के भन्छ ?
ज्योतिषि शास्त्र बमोजिम भने सूर्यमाथि राहुको प्रकोप लागेपछि सूर्यग्रहण लाग्छ । ज्योतिष केशव गौतमले धार्मिक मान्यता बमोजिम सूर्य राहुबाट ग्रसित भयो भने ग्रहण लागेको बताउनुहुन्छ । सूर्यग्रहणलाई समुद्र मन्थनसँग जोडिएको छ । समुद्र मन्थनपछि निस्केको अमृत विष्णुले कन्याको रुप धारण गरी देवता र दानवमा बाँड्न थाल्नुभयो । अमृत देवतालाई मात्रै दिने र छल गरेर दानवलाई अमृत नदिने देखेपछि एकजना दानव देवताको रुप धारण गरी अमृत लिन पुगे ।
दानवले देवताको रुप धारण गरेको देख्ने देवताले उक्त रहस्य खोल्नुभयो । र दानव र देवताबीच ठूलै युद्ध हुन पुग्यो । रहस्य खोल्ने अरु कोही नभई राहु हुनुहुन्थ्यो । ज्योतिष गौतमका अनुसार दानवबाट बच्न राहु संरक्षणको लागि कहिले सूर्यतिर ढल्किने त कहिले चन्द्रमा तिर ढल्किने अवस्था आयो । र दानवबाटै श्रापित भएर सूर्यतिर ढल्किदा सूर्यग्रहण लाग्ने र चन्द्रमातिर ढल्किदा चन्द्रग्रहण लाग्ने गौतमले बताउनुभयो ।
सूर्य वा चन्द्रग्रहण लागेको बेला भोजन गर्दा, नाङ्गो आँखाले हेर्नु जस्ता गतिविधि गर्नेलाई राहुको प्रकोप हुनु भनेको उक्त प्रकृयाले गर्दा नै भएको उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ ।